Shiinaha Custom Bistooladda bac soosaarayaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Bacda qoriga Bacda qoriga > Bacda rasaasta
Baastoorka garabka garabka ee xeelada leh Ku habboon baastooladaha, bistooladaha iyo dib u soo noqoshada.Wuxuu hayaa bastoolad iyo saddex majalladood.Bagaalka majaladda laba-geesoodka ah wuxuu hayaa laba majalladood oo waaweyn.
1. Soo bandhigida alaabada boorsada kombiyuutarka dumarka
Garabka bastoolad xeeladeed oo xeeladaysan.
Ku habboon bastoolado, bastoolado iyo dib u soo noqosho.
Waxay haysaa bastoolad iyo saddex majallad.
Bacda majaladda laba-geesoodka ah waxay haysaa laba majalladood oo waaweyn.
Boorso joornaal ah oo ku xigta holster-ka ayaa hanan kara joornaal yar ama toosh.
Naqshadeynta Universal waxay ku habboon tahay noocyo kala duwan oo cabirka qoryaha gacmeed.
Dhismaha nylon waara, biyuhu ma galaan.
Labada dhinacba waxay noqon karaan koox xun, waxaa si adag loogu hagaajin karaa booska ku habboon ee holster.
Xiritaanka Velcro waxay xaqiijineysaa amniga ugu badan.
Kuwa haya iyo boorsooyinka joornaalka waa la is weydaarsan karaa.
Waa doorashada ugu habboon ee militariga, sharci fulinta, ugaarsadayaasha, isdifaaca qoyska, iwm.
Midab: madow / cagaar / cagaar / CP / ACU / jungle Camoufalge.
Miisaanka: 0.3 KG.
Cabbirka hayaha: 190x 110 x 50mm.
Baaxadda joornaalka joornaalka ah: 130 x 110mm.
2. Xuduudaha sheyga boorsada kumbuyuutarka ee Mudanayaal (qeexitaanno)
210 d dhar Oxford
Waxaa ku jira 15.6 inji oo ka hooseeya cabbirka kombiyuutarada wax lagu qoro, kiniiniyada
3. Kala soocidda iyo astaamaha qoryaha fudud
Marka loo eego sheyga isticmaalka, baastooladaha waxaa loo qaybin karaa bastoolado militari, bastoolado booliis iyo bistoolado isboorti Sida ku xusan isticmaalkooda, waxaa loo qeybin karaa bistoolado isdifaac ah, bastoolado dagaal (bistoolado awood badan leh iyo bistoolado weerar) (oo ay ku jiraan bastoolado aamusan iyo bastoolado qarsoodi ah oo kala duwan); Marka loo eego qaab-dhismeedka waxaa loo qaybin karaa bastoolado otomaatig ah, dib-u-celin iyo bistoolado hawo ah (sida bastoolado isboorti).
Marka loo barbardhigo qoryaha kale, astaamaha ugu waaweyn ee qoryaha gacanku waa:
(1) cuf yar, mug yar, oo ay ka buuxaan xabbado bastoolad wadarta guud: bistoolad militari guud ahaan waa qiyaastii 1kg, bastoolad boolis qiyaastii 800g, way fududahay in la qaado.
(2) Foostada ayaa gaaban, jaangooyada ayaa inta badan udhaxeysa 7.62 iyo 11.43mm. Qaar ka mid ah qalabka wax lagu nadiifiyo ayaa la isticmaalaa, laakiin badankoodu waa 9mm jibaaran, taas oo ku habboon in la dilo bartilmaameedyada nolosha ee meelaha dhow.
(3) quudinta joornaalka, awooda isticmaalka joornaalka qoriga waa mid weyn, inta badan 6 ~ 12 wareeg, qaar ilaa 20 wareeg ah; Revolvers waxay leeyihiin awood yar oo ah 5 ilaa 6 wareeg.
(4) Badankood waxay adeegsadaan dabka nus-otomaatiga ah (hal xabbo), laakiin waxaa jira dhowr qori gacmeed (sida bistooladaha weerarada) waxay adeegsadaan dabka otomaatiga ah (toogashada joogtada ah) Kan hore wuxuu leeyahay heerka dagaalka 30 ~ 40 wareeg / min, halka tan dambe waxay leedahay xaddiga dagaal ee 120 wareeg / min.
(5) Qaab dhismeed fudud, hawlgal habboon, fududahay in waxsoosaar ballaaran la sameeyo, qiimo jaban.
Khasaaraha uu leeyahay bistoolada ayaa ah in kala duwanaanta wax ku oolka ahi ay gaaban tahay, guud ahaan qiyaastii 50m, halka qiyaasta wax ku oolka ah ee bistoolada weerarada ah ay dheer tahay, laakiin aan ka badnayn 150m. way liidataa, awoodda dabku uma fiicna sida qoriga hoose, sidaa darteed si ballaaran looma isticmaalin.
5. Xirxirida iyo rarida bacaha bistoolada
(2) Xajmiga cabbirka ee caadiga ah: 41cm X 30cm X 15cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka adiga.
(3) faahfaahinta xirxirida: 43cm X 33m X 45cm.10PCS / box.Carton wax: K = K 5 lakab oo warqad jiingado qaro weyn leh.
(8) Haddii loo baahdo, waxaan qaabeyn doonnaa habka xirxirashada boorsadan kuleejka ah iyadoo loo eegayo shuruudahaaga.
(9) Hadaad ubaahantahay shaybaarka shandadan boorsada ah, waxaan dooran doonaa inaan kuugu soo dirno diyaarad.
(1) Waxaan si adag u xakamayn doonnaa tayada badeecadaha oo waxaan kuugu soo gudbin doonaa adiga oo leh qiime 100% u qalma.
(2) Waxaan sameyn doonaa wax kasta oo macquul ah si aan kuu keydinno kharashyada adiga kugu baxa.
(3) Sanduuqa boostadayada shirkadu waa mid si joogto ah waxtar u leh, oo shaqaalaha xirfadlayaasha ah ee adeega macaamiisha, waad qori kartaa si aad ula tashato oo aad uga dacwooto wakhti kasta.
(4) Waxaan kugula socodsiin doonaa horumarka wax soo saar ee alaabooyinka amarka waqtiga lagu jiro inta lagu gudajiro howsha wax soo saarka, si aad si dhaqso leh ku ogaan karto xaalada amarka.
(6) Iibinta shaybaarka kadib. Haddii nooca ugu horreeya loo baahan yahay in wax laga beddelo, waxaan wax ka beddelaynaa shaybaarrada sida ku cad faahfaahinta wax ka beddelka, iyo dhammaan hannaanka soo saarista qaybtii labaad ee shaybaarka waa gebi ahaanba lacag la'aan.
Q2: Maxay yihiin shuruudahaaga bixinta?
S4: oraah noocee ah ayaad aqbashaa Immisa maalmood ayaa lagu jiraa mudada oraahda?
Q5. Imisa maalmood ayaa ah waqtiga hogaaminta wax soo saarkaaga tijaabada ah? Ma bixisaa shaybaar? Ma bilaashbaa mise waa siyaado?
Q6. Mudo intee le'eg ayay kugu qaadan doontaa inaad la xiriirto oo aad jawaab celiso?
Q8: Waa maxay awooddaada wax soo saar badan?
S9: Ma leedahay amarka ugu yar?
Calaamadaha kulul: Boorsada bistooladda, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka